उपासनाले १ बर्ष के कुरिन् कुन्नी ? – Mero Film
उपासनाले १ बर्ष के कुरिन् कुन्नी ?
कुर्नपर्छ भनेर कलाकार भन्छन् । सबै कलाकार भन्छन् र यस्तो । कलाकारलाई काम पाए हुने । भिडियो, फिल्म जतिपनि खेल्दिने । बन्दैन है यसरी क्रेज । बुझाइदिने कसले हो थाहा भएन । क्रेज गैसक्यो खोलाखोलै धेरै कलाकारको । तर, पनि रोकिने होइनन् क्यारे ।
उपासना सिंह ठकुरी अभिनेत्री यो कुरामा फरक । भिडियो त उनले अफर आएको हो गरिनन् । फिल्म पनि १ बर्षसम्म कुरिन् । कबड्डी को तेश्रो सिरिज हिट भएर मन जितेर दर्शकमाझ उत्पाद मच्चाएकी अभिनेत्रीलाई अफर नजाने कुरा भयो र त अनी ।
तर, उनले कुरिन् । १ बर्ष कुरेपछि फिल्म खेल्दैछिन् डिसेम्बर फल्स । आर्यन सिग्देल हुन् हिरो । हजार जुनी सम्म फिल्ममा आर्यन सिग्देलकी छोरी बनिन् स्वस्तिमा खड्का । डिसेम्बर फल्समा आर्यन सिग्देलको प्रेमिका बन्ने हुन् उपासना सिंह ठकुरी ।
कथा मन पर्यो यसैले गरेको हो भनेर सबैले भनेका छन् भन्छन् । कती सुन्ने एउटै कुरा । कथा नराम्रो लागे त गर्दिन है भनेकी हुन् उपासनाले । फिल्म डिसेम्बर फल्स खेल्ने पक्का भयो । १ बर्ष के कुरिन् त उपासनाले ? देखिएला नी पछि भनेर भनौ ।
२०७७ मंसिर १९ गते १३:३३ मा प्रकाशित
कान्छा उमेरका केटासँग बिहे गर्न तयार छिन् रीमा ?
फ्लप फिल्म हिट कहिले हुने हो र ऋचा जी ?
३० भन्दा बढि स्क्रिप्ट छानेपछि हमाललाई जुरेको ‘सत्यम’
रचना र प्रबिनको गीतमा सुरक्षा पन्तको अभिनय